थाहा खबर: बोमलाल गिरी
मंसिरको मध्य महिना। रात छिप्पिँदो छ। जाडो बढ्दो छ। मौसमअनुसार रात चिसै होला तर प्रेमी–प्रेमिका र आफन्तको हात र साथले दिने तातोलाई मौसमको चिसोले सायदै जित्न सक्ला! निकै ठूलो आवाजमा घन्किएको बाजा र ड्रम सेटको धूनले शहर नै थर्किएको छ। कोही म्युजिकको ता...
हाकिमले स्यालुट गर्ने ती ट्राफिक प्रहरी
पोखरा : घर गएका यात्रुहरुलाई राजधानी फर्कन निक्कै हतार थियो। दसैं भर्खर सकिएकाले सवारी साधन पाउन हम्मेहम्मे थियो। नजिकैको माइक्रोबसको टिकट काउण्टरमा दुई जना कर्मचारी छन्। टिकट खोज्नेहरुको भीड छ। अगाडि पट्टी दुईवटा माइक्रोबस छ। तर काउण्टरका कर्मचारी न टिकट दिन्छन् न कुन...
| असोज ४, २०७३
प्रिय नेता नमस्कार! तिम्रो बारेमा त जानकार नै छु, तिमी सञ्चै छौं, म खुशी छु। तर यहाँ पनि म सञ्चै भएको जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुशी लाग्छ। सायद तिमीले त मलाई बिर्सिसक्यौं होला। नबिर्सनु पनि कसरी? हाम्रो संगत भएको १० वर्ष मात्र त भएको थियो। तर विछोड भएको पनि...